Danjiraha Soomaaliya ee Pakistaan oo la kulantay wasiirada waxbarashada, iyo caafimaadka-Sawirro – Radio Muqdisho
Danjiraha Soomaaliya ee Pakistaan oo la kulantay wasiirada waxbarashada, iyo caafimaadka-Sawirro
Danjiraha dowladda Soomaaliya u fadhisa dalka Pakistan marwo Khadiija Maxamed Al-Makhzuumi ayaa kulan la yeelatay wasiirka waxbarashada dalkaas Muhammad Baligh-ur-Rehman, ayagoo ka wada hadlay arimo ah kamid tahay xoojinta xiriirka labada dalka gaar ahaan dhanka waxbarashada.
Labada mas’uul ayaa sidoo kale, wadahadalkooda waxaa ay diiradda ku saareen dib u soo nooleynta heshiisyadii waxbarasho ee ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Pakistan kaas oo ay wada gaareen muddo 30 sano ka hor ah.
Safiirka Soomaaliya u qaabilsan dalka Pakistan ayaa waxaa ay wasiirka waxbarashada ka codsatay in dowladda Pakistaan kordhiso tirada deeqaha waxbarasho ay siiyo Soomaaliya isla markaana la joogteeyo xiriirka iskaashi ee ka dhaxeeya wasaaradaha waxbarashada dalalka Soomaaliya iyo Pakistaan
Kulanka ay wada yeesheen danjiraha Soomaaliya ee dalka Pakistaan iyo wasiirka waxbarashada ee dalkaa ayaa sidoo kale, waxaa goob joogka ahaa xubno ka tirsan guddiga tacliinta sare ee dalkaas oo loo soo qaabiyo HEC iyo xoghayaha joogtada ah ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada Islamabad C/laahi Xaaji Daa’uud.
Wasiirka waxbarashada dalka Pakistaan, Muhammad Baligh-ur-Rehman, ayaa amaanay ardayda Soomaaliyeed ee dalkaas wax ka barata, isagoo sidoo kalena soo dhoweeyay codsiga Soomaaliya ugu yimid dalkiisa.
Dhanka kale, danjiraha Soomaaliya u fadhisa dalka Pakistaan Marwo Khadiija Al-Makhzuumi ayaa sidoo kale kulan la yeelatay wasiirka caafimaadka ee dalkaas, Saira Afzal, iyadoona Marwo Makhzuumi ka codsatay wasiirka in ardayda Soomaaliyeed la siiyo tababaro caafimaadka marka ay dhameystaan waxbarashada jaamacadaha.
Dalka Pakistaan ayaa waxaa wax ku bartay boqolaal arday Soomaaliyeed halka tiro kale oo aad u bandanna ay ka soo baxeen jaamacadaha kala duwan ee dalkaas ayagoo diyaariyay kuliyadaha kala duwan sida caafimaadka, dhaqaalaha, Engineer, xiriirka caalamiga ah, siyaasadda iyo kuwo kale oo badan.
Arday dhameysatay barashada Qur’aanka kariimka ah oo la abaalmariyay-Sawirro